Nowy androm-piainana 52 an'ny Idea dia manomboka amin'ny blôginao
Raha te hiverina matetika any amin’ny blôginao ny mpitsidika tranonkala, dia mila manome azy ireo fitaovana vaovao hamaky ianao. Ilaina ny mahafantatra fa afaka matoky anao izy ireo hanome torohevitra tsara azy ireo ary hanome azy amin’ny fandaharam-potoana tsy tapaka. Mety hanontany tena aloha ianao motyka firy no tena mila mamorona lahatsoratra bilaogy vaovao.
Misy orinasa iray mamoaka mihoatra ny 16 hafatra iray isam-bolana telo sy tapany sy sanyany ny fifamoivoizana tahaka izay nandefasana imbetsaka isam-bolana fotsiny. Noho izany, raha te hampiasa io modely io ianao dia mila hamoaka lahatsoratra voalohany indimy in-efatra isan-kerinandro.
3 Nowa hevitra 52 dia manomboka
Ny lahatsoratra efatra isan-kerinandro dia mety tsy hihoatry ny feo, fa ny fiainana dia miezaka ny mandeha amin’ny lālana. Manana orinasa mihazakazaka ianao, fianakaviana iray mitazona izany, ary mety ho tombontsoanao manokana sy raharaham-barotra vitsivitsy izay maka ny fotoanao. Ny soratra dia mety ho tsy mety ho anao, ary ny fananganana hevitra vaovao efatra isan-kerinandro dia mety hetra.
Rehefa takiana aminao ny handefa matetika izany, dia mora be ny mihazakazaka miditra amin’ny alàlan’ny mpanoratra. Soa ihany, misy zavatra azonao atao mba hiasa amin’ny alālan’ny sisan-tsoratry ny mpanoratra, mitadiava hevitra vaovao, ary mifikitra amin’ny fandaharam-potoana.
Ny hafatrao dia tokony ho azo ambara ho an’ny mpamaky anao, noho izany dia fantany ny fotoana hikatsahana ny lahatsoratra. Azonao atao, ohatra, ny mandefa ny Zoma amin’ny 13.00 ary hizara amin’ny media sosialy amin’ny fotoana iray ihany. Ny mpamaky sy mpanaraka anao dia hanantena izany, koa mitandrema hafatra vitsivitsy amin’ny filaharana mba hahafeno ireo zavatra andrasana.
Ka raha manoratra lahatsoratra 1 isan-kerinandro ianao dia mety hametraka tanjona hanoratanao indroa izany tamin’ny antsasaky ny taona ary hanoratra lahatsoratra 2 isan-kerinandro. Ny antony fotsiny dia manamboatra fandaharam-potoana dia tsy midika motyka tsy afaka manampy azy ianao. Atombohy amin’ny tanjona tratrarina ary azonao atao hatrany ny tanjonao.
Andao hiverina any amin’ity tranokalaity ary hojerentsika ilay izy. Misy Antony tohizako hatrany momba ity tranonkala ity – mahomby.
Ojej! Na dia mety tsy afaka hanomboka hikasika ny haavon’ny famoahana amin’ny tranokala kely (na somary lehibe aza) ianao dia mampiseho ny maha-zava-dehibe ny famoahana matetika.
Neil Patel dia mpamaham-bolongana mahomby izay mandinika tsara ny ataon’ny bilaogera hafa. Mety ho efa naheno ny anarany izy raha efa ela dia tany amin’ny faribolana bolongana. Nanamarika i Patel fa na dia mahomby aza ny tranokala toa an’i Huffington Post, dia misy bilaogera mahomby maro hafa izay tsy mamita afa-tsy amin’ny herinandro fotsiny. Ny lakile, hoy i Patel, dia ny Tsy mamorona afa-tsy votoatiny fotsiny ihany fa "toetra unikać lenty".
Avy eo, rehefa manomboka manoratra lohahevitra ianao dia avereno jerena ny valin’ny 10 ambony indrindra momba an’io fikarohana io ary jereo ny fomba ahafahanao manome zavatra manan-danja kokoa na tsy manam-paharoa nony nyny fikarohana.
Nowa hevitra 52 dia manomboka
Ohatra amin’ny tena fiainana: Vakio ny dia ny dian’ny Groove ny vola 10 milionów $.
Erytrereto ny fomba ahafahanao mizara tantara iray mifandraika amin’ny raharahanao.
Erytrereto ny zavatra tena mahagaga izay mety hitranga, fa toa tsy ho vita mihitsy, ao amin’ny orinasanao. Ankehitriny, zarao ny eritreritrao sy ny nofinanao amin’ireo mpamaky anao. Ity no karazana fanta-daza. Any amin’ny tontolo iray tena tsara, ny mpilalao golf rehetra dia mahazo ny lavaka amin’ny iray.
Raha mivarotra sakafo alika unikać lenta ianao, dia afaka mizara fampahalalana momba ny fampahatsiahivan’ireo biby fiompy amin’ny taona vitsivitsy lasa izay sy ny antony ananan’ny alika ny mpamaky anao.
Indraindray, ny fomba fitondra-tena tsara efa tranainy dia ny zavatra tsara indrindra azonao soratana. Mety hieritreritra ianao motyka tsotra loatra izany, kanefa misy olona tsy nampiasa ny vokatra na ny serivisy na oviana na oviana dia mety mila fanazavana amin’ny antsipiriany.
Jereo ny valin-kevitrao, fora, na amin’ny media sosialy.
Misy olona afaka manadinadina olona mahafantatra tsara momba ny lohahevitra mifandraika amin’ny liam-pandrenesana? Azonao atao ny manamarika fa ato amin’ny WHSR isika dia manao dinidinika maromaro miaraka amin’ny manam-pahaizana amin’ny zavatra toy ny fampiantranoana, WordPress plugin mpamorona, mpangalatra, sns.
Kop głębiej: Fantaro ny fomba famoronana Sary Mahafinaritra.
Misy teny nindramina izay ilainao matetika ho famporisihana na famporisihana? Ho ahy dia tiako tononkalo izay matetika misy an’i Ralph Waldo Emerson mitondra ny lohateny hoe Fahombiazana (ny loharanom-baovao sasany dia nanoratra azy fa olon-kafa no nosoratany, fa toa ny diksionany kosa, ka dia aaka ho’ny mpanoratra). Somary lava kokoa ny tononkalo, fa ny ampahany lazaiko matetika dia any amin’ny farany ka lasa:
Ny loha hevitra fototra mifangaro amin’ny unikać kokoa dia hampiditra mpanjifa vaovao sy mpanjifa mitohy.
Ohatra amin’ny tena fiainana: Google SEO vs. My Guest Guest.
Udostępniaj nowe czaty na Twitterze?
Mamorona podcasty na lahatsary amin’ny lohahevitrao ianao. Makà fotoana handikana ny iray ary hizara azy ho lahatsoratra bilaogy. Tsy ny olon-drehetra no te hijery horonan-tary, na mety ho any am-piasana izay tsy misy feo. Na dia izany aza, amin’ny fanoratana azy amin’ny endrika an-tsoratra, dia ahafahanao mizara mora amin’ny olona rehetra izany.
In inona na inona karazana orinasanao, rehefa nanao izany nandritra ny fotoana kelikely ianao dia hianatra tratrany sy tricks izay manampy anao hahomby kokoa. Inona avy ireo hack nangoninao tamin’ny fomba mety hamonjy ny fotoana ho an’ireo mpamaky?